यिनै हुन् २६ वर्षीय भतिज लोकबहादुर कार्की जसले ‘हेपाई’ सहन नसक्दा गरे कहालीलाग्दो ह त्या ! – Kavrepati
Home / प्रमुख समाचार / यिनै हुन् २६ वर्षीय भतिज लोकबहादुर कार्की जसले ‘हेपाई’ सहन नसक्दा गरे कहालीलाग्दो ह त्या !
यिनै हुन् २६ वर्षीय भतिज लोकबहादुर कार्की जसले ‘हेपाई’ सहन नसक्दा गरे कहालीलाग्दो ह त्या !
admin September 11, 2021	प्रमुख समाचार Leaveacomment 810 Views
भर्खरै बुद्ध एयरको विमान ठूलो दुर्घटनाबाट बच्यो
अमेरिकामा गाडीको ठ’क्करबाट नेपाली महिला बर्षा खड्का प्रसाईको नि’धन
ह’त्या ग’रि’एका तेजबहादुरले ‘हेपेका कारण’ आफुले आवेगमा ह’त्या गरेको आरोपी लोकबहादुरले प्रहरीलाई बताएका छन् । तेजबहादुरका दुईभाई छोरा विदेशमा छन् । लोकबहादुरलाई आफु विदेश जान नसकेकोमा ‘हिनतावोध’ थियो । स्थानीयहरुका अनुसार तेजबहादुरमा अरुलाई हे’प्ने ‘प्रवृत्ति’ थियो । तेजबहादुरको प्रवृत्ति लोकबहादुरलाई मन परेको थिएन । ‘हेपाई’ खप्न नसकेर लोकबहादुरले तेजबहादुर परिवारको विनाश गरेको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकृतहरु बताउँछन् ।
परिवारका ६ जनाकै छुट्टाछुट्टै स्थानमा शव फेला परको थियो। उनीहरूको चार वटा ठाउँमा शव फेला परेको थियो। उनीहरूलाई पा’लैपा’लो टाउकोमा प्र’हा’र ग’रे’र ह’त्या ग’रिएको थियो। पो’ष्ट’मार्टमको प्रारम्भिक रिपोर्टमा उनीहरूको मृत्यु ‘ब्लन्ट फोर्स इन्जुरी’ले भएको खुलेको थियो।
पारिवारीक दुश्मनीका कारण घटना भएको प्रहरीले जनाएको छ। मृतकको घरमा रहेको धन सम्पत्ति सुरक्षित रहेको हुनाले आर्थिक कारण घटना नभएको निष्कर्ष प्रहरीको छ। घटना एकाबिहानै भएको पनि अनुसन्धानमा खुलेको छ। प्रहरीका अनुसार घटना साढे ५ देखि ६ बजेको बीचमा भएको देखिएको छ। कार्कीले सुरूमा तेजबहादुरलाई प्रहार गरेको र त्यसपछि क्रमश: पालैपालो अरूलाई प्रहार गरेको देखिएको प्रहरीले जनाएको छ।
Previous नेपालका अर्का एक चर्चित ब्याक्तिको केहीबेर अघि निधन
Next संखुवासभाको डिएसपीलाई सिधै फोन, ६ जनाको ह,त्या यसकारण भएको रहेछ,प्रहरी नै चकित-भिडियो सहित
पाइलटको सनकका कारण घट्यो यस्तो अनौठो घटना !
काठमाडौं । नेपाल एयरलाइन्सको ट्विन अटर विमानले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट रुकुमको चौरजहारी उडान भर्ने अनुमति …